I-ETIAS yaBemi baseBritane
Ukuphela kwe-2021, abemi base-UK kuyakufuneka bafumane i-visa ye-ETIAS yokurhoxa ukuze bangene kumazwe akwi-Schengen Zone ye-European Union. Nantsi into abahambi ekufuneka beyazi ukuze baqonde le mfuno intsha kwaye bafumane amaxwebhu okuhamba abawadingayo ngaphambi kokuba bashiye amakhaya.
Yintoni i-ETIAS Visa Waiver?
Inkqubo yoLwazi ngezohambo yaseYurophu kunye neNkqubo yokuGunyazisa (i-ETIAS) ijolise ekomelezeni imida ye-EU kunye nokugcina abemi nabahambi bekhuselekile apho. AKUKHO visa kodwa yinkqubo yokurhoxisa i-visa. Nangona kunjalo, kuhlala kubhekiswa kuyo njenge- "ETIAS visa" kwincoko eqhelekileyo.
Ukurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS eYurophu kuyafana nenkqubo yokurhoxisa i-visa esele imiselwe eMelika. Ivumela urhulumente ukuba avume kwaye alandelele abahambi ngeenjongo zokuphula umngcipheko kwezokhuseleko kunye nokulandelela abahambi ukunqanda ubugrogrisi nokuphakamisa amanqanaba okhuseleko.
Nje ukuba ifunyenwe, i-ETIAS yabemi base-UK iya kuvumela ukuhamba ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90 ngaphakathi kwemida ye-EU. Abahambi akuyi kufuneka bafumane imvume eyahlukileyo yokuhamba phakathi kwamazwe enza iSchengen Zone. I-visa ye-ETIAS iya kusebenza ukuya kuthi ga kwiminyaka emithathu okanye kude kuphele ipasipoti yangoku.
Ukurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS eYurophu kulungile kubahambi abahamba iYurophu njengenxalenye yolunye uhambo, abo batyelelayo njengabakhenkethi, kunye nabo benza ishishini apho. Bonke abanye abahambi baya kufuna uhlobo olwahlukileyo lwesigunyaziso sokuhamba ngaphambi kokuba bangene kwiZowuni yeSchengen.
Ukufaka isicelo se-ETIAS
Abahambi abafuna i-ETIAS yabemi base-UK bangaya apha ukufaka isicelo. Bayakufuna:
Ipaspoti esebenzayo yase-UK
Isicelo sicela ulwazi olwahlukeneyo, kubandakanya:
Idilesi yomenzi-sicelo, umhla wokuzalwa, kunye nelizwe lokuhlala
Ulwazi lokhuseleko. Eli candelo libandakanya imibuzo malunga nobukho bomhambi kwiindawo apho bekukho izidubedube, ukubanjwa kwabo kunye nembali yokugwetywa, nokunye okuninzi.
Ulwazi malunga nohambo lwangaphambili
Nje ukuba umhambi angene kulwazi lwakhe kwaye ahlawule umrhumo wesicelo, idatha yabo iya kujongwa kwinani loovimba beenkcukacha. Iya kuvavanywa ngokusekwe kwi-ETIAS yokurhoxisa visa kwimigangatho yaseYurophu kunye noluhlu lokubukela lwe-EU.
Uninzi lwezicelo ziya kuvunywa kwimizuzu embalwa, nangona ezinye izicelo zingathatha ixesha elide. Emva kokuba kusetyenzwe, abafaki-zicelo baya kufumana i-imeyile ebazisa ngemeko yabo yokurhoxisa. Ukuba i-visa yabo ye-ETIAS yamkelwe, baya kufumana isigunyaziso sokuhamba. Kuya kufuneka bayiprinte le nto ukubonisa amagosa ekufikeni kwabo eYurophu, nangona amagosa okufudukela kwelinye ilizwe kufuneka abenakho ukuwajonga nge-elektroniki.
Ukuya eYurophu kunokuba mnandi kwaye kunika umdla. Ukugcina abahambi kunye nabemi bekhuselekile, iindwendwe ezivela eBritane kungekudala ziya kufuna ukufumana i-visa ye-ETIAS yokurhoxisa ukungena kwi-EU. Nje ukuba banayo le nto, baya kuba nakho ukwenza ukuba amaphupha abo okuhamba azaliseke.